နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အဖြူရောင်ကမ္ဘာလေး …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အဖြူရောင်ကမ္ဘာလေး ….
နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အဖြူရောင်ကမ္ဘာလေး ….
Posted by weiwei on Nov 1, 2010 in News, Photography, Travel | 11 comments
အဖြူရောင် ကမ္ဘာလေးထဲ ၀င်ကြည့်လိုက်ကြပါအုန်းလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ထင်ရှားတဲ့ ဇာတ်လမ်းရုပ်ထုကို တစ်နေရာထဲမှာ မြင်တွေ့နိုင်လို့ ကမ္ဘာအသေးလေးတစ်ခုထဲ ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ အားလုံးဖြူဖွေးနေတာတွေ့ရတော့ အမြင်တစ်မျိုးဆန်းနေတာပေါ့။ အဲဒီနေရာကလဲ ရေခဲနန်းတော်နဲ့အပြိုင် ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ အေးတာကတော့ အလွန်ပါပဲ။ ဓါတ်ပုံတွေကို သေချာချိန်ပြီးမရိုက်နိုင်ပါဘူး။ နှင်းကမ္ဘာကြီးက အကြီးကြီးပါ။ ကြိုက်သလောက်လည်ပတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်အေးလွန်းတော့ ကြာကြာမနေနိုင်ပါဘူး။ ဗမာပြည်မှာ မတွေ့နိုင်တဲ့ပုံတွေမို့လို့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ကြည့်ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။
တစ်ခါလောက်တော့ ရောက်ဖူးချင်သား … ဘယ်လိုသွားရလဲ
ရန်ကုန်-ပေကျင်း လေယာဉ်လက်မှတ်ကိုရန်ကုန်ကနေ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ တရုတ်သံရုံးမှာဗီဇာလုပ်တာလဲ လွယ်ပါတယ်။ ပေကျင်းကနေ ဟာ့ပင်းကိုတော့ ရထားစီးလဲရတယ် … လေယာဉ်စီးလဲရပါတယ် … တရုတ်စကားမပြောတတ်ရင်တော့ tourist tour ကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်ပြီးသွားမှ အဆင်ပြေမယ် … ဇန်န၀ါနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ပွဲတော်ရှိတယ် ..
ဒီပုံတွေအောက်မှာ စာတန်းထိုးဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး .. ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ သေချာမသိလို့ပါ .. ဓါတ်ပုံပါအောင်တောင်မနဲရိုက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ ပုံတွေရဲ့ရာဇ၀င်တွေကို မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး … အပြင်မှာ အရမ်းကိုလှတာ ဓါတ်ပုံထဲကျတော့ အဖြူဖြစ်နေတော့ သိပ်မပေါ်ဘူး …
ပုံတင်တဲ့အခါ အလယ်လောက်မှာ caption ဆိုတဲ့ပုံစာကို ထည့်လို့ရတဲ့ အကွက်လေးပေးထားတယ်။ အဲဒီမှာ မြန်မာလို့ ရိုက်ထည့်ရင် စာကိုပုံနဲ့တွဲပေါ်လိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးပဲ ကိုကြောင်ကြီးရေ …
လူကလဲရောက်ချင် စိတ်ကလဲ ရောက်ချင်
သွားရင်ကုန်မယ့် ပိုက်ပိုက်က မရှိတော့ တင်ပေးတဲ့ပုံလေးဘဲအားရပါးရ ကြည့်လိုက်တော့မယ်။
အရမ်းလှပါတယ်.. ရတနာပုံနေပြည်တော် တရုတ်ပြည် ခရီးသွား သတင်းထောက် ပီသပါပေတယ်။ ရေခဲ နန်းတော်ထက် ဒီဟာလေးကို ပိုကြိုက်တယ်။ သွားချင်တဲ့ ပိုးလေးတောင် နဲနဲ ထ လာပြီ.. အေးမှာတော့ ကြောက်တယ်။
ပို့စ်တစ်ခု ၁၀၀ ကျပ်ပဲရတာဆိုတော့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း သတင်းထောက်ပေါ့နော် … အားပေးတဲ့အတွက် ဆက်လက်ခရီးသွားပြီး သတင်းထောက်လိုက်အုန်းမယ် ..
အရမ်းလှတယ် ကျေးဇူးတင်တယ် မဝေရေ…..
ကြည့်ရင်းနဲ့တောင်ချမ်းပီးရင်တွေခုန်လာတယ် သွားချင်လိုက်တာ တစ်ကိုယ်လုံးသေနေပီ လေးပေါက်ပြောသလိုဖြစ်နေလို့ငြိမ်နေတာ